Inweta More Likes For Instagram Ads: 8 Best Practices To Soro | Martech Zone
Asọmpi na-ekpo ọkụ n'elu ikpo okwu n'agbanyeghị, ma ụdị na-achọ ị nweta ọtụtụ ihe na mgbasa ozi mgbasa ozi Instagram ha. Otu ụdị usoro eji eji elele njikọ aka, ọnụahịa akara na-enwetakwu mmasị. Anyị ga-ekwu maka atụmatụ nwere ike imeziwanye ọnụ ọgụgụ nke mmasị ị nwere ike ịnweta maka mgbasa ozi gị na akaụntụ gị.
Enwetakwu mmasị maka mgbasa ozi Instagram
Mmasị dị oke mkpa maka ọganiihu nke mkpọsa ọ bụla na Instagram. Ọ na-egosi njikọ aka na ebumnuche sitere n'aka ndị ọrụ, nke pụtara na ị na-aga n'ụzọ ziri ezi. Nke ahụ kwuru, ọ nwere ike isiri gị ike ime ka ndị mmadụ nwee mmasị na post gị, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị bụ akara nke na-amalite. Anyị egosipụtawo ụzọ ụfọdụ nwere ike inyere gị aka ịnweta ọnụọgụ kachasị amasị gị maka akara gị.
1. Ekekọrịta Foto ndị dị elu na vidiyo
Zọ kachasị mma iji kwenye mmasị na akaụntụ gị bụ mgbe ị biputere ọdịnaya dị elu. Nke a bụ eziokwu karịsịa n'ihe gbasara mgbasa ozi n'ihi na ọtụtụ mmadụ ga-ahụ ha karịa naanị ndị na-eso ụzọ gị. Ọtụtụ ụdị na-agbasi mbọ ike iji hụ na mgbasa ozi ha na-atụgharị ọtụtụ isi. Mgbasa mgbasa ozi a na-eme nke ọma nwere ọtụtụ ohere iji gaa gwọọ, na-eme ka ụdị ahụ pụta ìhè. Nke a bụ otu ihe atụ maka mgbasa ozi dị elu na Instagram
2. Mepụta Ezi Okwu
Ọ bụ ezie na ihe kachasị amasị Instagram bụ na ọ bụ ikpo okwu na-adọrọ adọrọ, isi okwu na-abịa nso nke abụọ ma a bịa n'ụdị na-egosipụta nka ha. A na - ahụta ihe ederede dị mma iji mee ka mmata mara ma cheta enyemaka. Ọzọkwa, ntinye okwu bụ akụkụ nke post gị na ịnwere ike ịdaghachi iji nwetakwuo mmasị ma ọ bụrụ na onyogho ezughi. A Okwu na-adọrọ adọrọ nwekwara ike ime ka ndị na-eso ụzọ na-aza ajụjụ, nke nwere ike melite njikọ aka nke ukwuu.
3. Jiri CTAs na Hashtags Jiri Amamihe
Hashtags na CTA (oku na-aga ime ihe) dị oke mma na ndị mmadụ itinye aka, ọ bụrụhaala na i jiri ha mee ihe n'ụzọ ziri ezi. Hashtags bụ akụkụ dị oké mkpa nke Atụmatụ ntinye aka na Instagram. Iji nweta mgbasa ozi gị na ndị nọ gị nso, jiri hashtags mpaghara maka mgbasa ozi Instagram gị. Ọzọkwa, ị nwere ike lee anya hashtags a ma ama na nchịkọta gị iji nweta karịa ndị na-eso ụzọ maka akaụntụ gị.
A na-eji CTA agba ndị mmadụ ume imezu mkpebi na akaụntụ Instagram gị. CTA bụ ihe gbara ọkpụrụkpụ, ọ dịkwa mkpa ka ị ghọta ebe na otu esi eji ha. Ndị mmadụ ga - anabata CTA ma ọ bụrụ na enwere ihe bara uru ị na - enye ha. Mepụta echiche nke ịdị ngwa mgbe ị na-eji CTA bụ usoro dị mma. Mkpụrụokwu dịka pịa ugbu a ka ịchọta ihe ndị ọzọ, dị naanị maka obere oge bụ ezigbo ihe atụ iji mee ka ndị mmadụ pịa.
4. Chọta Ezigbo Oge Izipu Oge
Akụkụ dị mkpa nke ịdọrọ njikọta na akaụntụ gị bụ ijide n'aka na oge mgbasa ozi gị dabara na mgbe ndị na-eso ụzọ gị kacha arụ ọrụ. Enweghị onye ọ bụla "oge kwesịrị ekwesị iji biputere" na Instagram - ọ dị iche na ụdị azụmaahịa na ebe a na-eche. Nke ahụ kwuru, iwu isi mkpịsị aka iji dọta ndị na-azụ ahịa bụ ịkwasa n'oge oge ọrụ na-adịghị anya n'ehihie dị ka nri ehihie (Elekere 11:00 ruo 1:00 nke abalị) ma ọ bụ mgbe ị gachara ọrụ (7: 00 pm na 9: 00 pm). Nke ahụ kwuru, ịkwesịrị iburu n'uche ebe ị na-ezubere. Enwekwara nkọwa zuru ezu karị gbasara oge iji biputere na Instagram site na Hubspot na ị nwere ike lelee.
5. Cross-ikpo okwu Promotion
Instagram na-enye aka ịgafe n’elu ikpo okwu, nke mere ka ọ bụrụ nnukwu ikpo okwu kwalite azụmahịa gị na Can nwere ike iji ndepụta Instagram gị dị ka isi mmalite maka mmelite na nyiwe ndị ọzọ dịka Facebook na Twitter. Nke a nwere ike rụọ ọrụ ọkacha mmasị gị mgbe ị na-eduzi asọmpi. Ndị mmadụ hụrụ mmeri mmeri n'anya, yabụ ịnweta okwu ahụ na nyiwe mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ nwere ike inyere gị aka inweta ohere maka akara gị. Ọzọkwa, ọtụtụ ndị ejiri akara URL na bio ha iji jikọta ibe ha na Facebook site na ebe ị nwere ike iduzi ha na URL ndị ọzọ.
6. Dị ka na ịza ajụjụ na Niche metụtara
Methodzọ ọzọ ị nwere ike iwepụta mmasị na akụkọ metụtara ya n'otu niche bụ mgbe ị na-ewepụta oge iji soro ha rụọ ọrụ na akaụntụ ha. Instagram na-arụ ọrụ mgbe niile na iwu dị mfe - ntinye aka maka itinye aka. Yabụ mgbe ị na-emekọ ihe na akaụntụ ha, ị na-enwekwu ohere ịnweta isonye na ha. Nwekwara ike ịmatakwu ndị na-eso ụzọ nwere mmasị na akaụntụ gị site na ebe ahụ, nke pụtara ọtụtụ mmasị maka akaụntụ gị ogologo oge.
7. Jikọọ Otu Instagram njikọ aka Pod
Pod bụ ozi dị n'etiti otu ndị nọ n'otu niche na Instagram ma chọọ ịmalite ndị na-eso ụzọ ha, mmasị ha, ma ọ bụ echiche ha. Ebumnuche bụ isi nke pod ọ bụla bụ na mgbe ọ bụla onye otu pod ahụ na-etinye ọdịnaya ọhụrụ, a na-atụ anya ka ndị nọ na ya tinye aka na ya. Nke a na - enyere post ahụ aka n’elu ntanetịime ndị na - eso ụzọ ha. Ndị mmadụ na-eji pọds kemgbe Instagram mere mgbanwe na algorithm ha. Mmelite ngosipụta ndị ahụ dị ka ewu ewu karịa usoro oge.
8. Mee Mgbasa ozi Mgbasa Ozi Gị Na-akpali Mmasị
Otu ụzọ dịkarịsịrị ike iji nwekwuo mmasị maka mgbasa ozi gị bụ ilekwasị anya n'ịdị ọdịnaya. Ikwesiri igba mbọ hụ na mgbasa ozi gị nwere ogo zuru oke maka ha, yabụ ha kwụpụrụ na ọdịnaya ndị ọzọ. Nke a gụnyere iji ihe okike na ihe okike eme ihe iji dọta uche ndị na-ege ntị. Ihe atụ nke otu ụdị si eme nke a -
Starbucks nwere a #FrappuccinoHappyHour mkpọsa nke malitere ịrịa. Ha mezuru nke a site na agba di egwu na ojiji okike iji mepụta ihe puru iche ndi umuaka ha huru n’anya.
Ikwusi elu - Onye ọ bụla nwere ike inweta ihe na-amasị ya na Instagram
Mkparịta ụka ndị na-eso ụzọ bụ akụkụ buru ibu nke Instagram n'enweghị obi abụọ ọ bụla, na mmasị Instagram bụ ụzọ ndị mmadụ na-ahụkarị iji mee ka ụdị mara na ha masịrị (enweghị ntaramahụhụ!) Dị na-emefu nnukwu ego na mgbasa ozi, ma mgbe ụfọdụ ha anaghị enwe ike ịme ha ka ha rụọ ọrụ.
Ọ bụ ezie na inwekwu mmasị maka mgbasa ozi abụghị ihe mgbagwoju anya, ịkwesịrị ilekwasị anya karịa akụkụ ole na ole iji jide n'aka na ị ga-emezi. Ihe ndị dị ka oge ezipụ, ogo onyonyo, na nkọwapụta bụ ihe ndị dị mkpa ị ga-atụle ma ọ bụrụ na ịchọrọ ka ndị na-eso ụzọ gị zaghachi. Ndụmọdụ ndị a kwesịrị inye gị ụfọdụ echiche gbasara otu ị ga-esi nweta ọtụtụ mgbasa ozi mgbasa ozi gị na Instagram. Ekekọrịta otu i siri nwee ike ịgbanwe usoro mgbasa ozi gị iji nweta nsonaazụ kacha mma.